နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်း | The Faith of Noah | Real Conversion
၂၀၁၃၊ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊
သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြား
“နောဧသည် မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကို ဖေါ်ပြသော ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သား တို့ကို ကယ်တင်ခြင်း ငှါသင်္ဘေကိုတည်လေ၏။ ထိုသို့ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကီသားတို့ကို အပြစ်တင်၍ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သောကြောင့် ဖြောင့် မတ်ခြင်း ကိုလည်း အမွေခံရ၏” (ဟေဗြဲ ၁၁း၇)။
ယနေ့ည နောဧ၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အနည်းငယ် ဝေငှလို ပါသည်။ နောဧသည် အလွန်အင်မတန်အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သမိုင်း၌ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ နောဧမရှိခဲ့လျှင် ယနေ့လူသားမျိုးနွယ်ရှိလာမည်မဟုတ်ချေ။ အကယ်၍ နောဧက မိမိအိမ်သူအိမ်သားများကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှ သင်္ဘောဖြင့် မကယ်တင်ခဲ့သော် လူမျိုးနွယ်အားလုံး ရေထဲ၌နစ်မြှပ်သေဆုံးခဲ့ရကြပြီးဖြစ်သည်။
(၆၈၈-၇၄၁ခုနှစ်)တုန်းက မူဆလင်တို့၏ ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခြင်းကို ချားလ်မာတလ်က ကယ်တင်ခဲ့သောကြောင့် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်အား ကျွန်ုပ်တို့လေးစားကြည်ညို ကြရသည်။ (၁၈၇၄-၁၉၆၅)တွင် ဟစ်တလာက ဥရောပတိုက်သားတို့အား ဝင်ရောက်စီး နှင်းခြင်းကို ခုခံကာကွယ်ပေးသော ဝီစတန်ချယဟီးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့လေးစားကြည်ညို ကြရပါသည်။ (၁၈၀၉-၁၈၆၅ခုနှစ်) အမေရိကန်ုနိုင်ငံတွင် လူမျိုးရေးနှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းကို တားဆီးကယ်တင်ခဲ့သော သမ္မတအာဗြဟံလင်းကွန်းအား ကျွန်ုပ်တို့လေးစားကြ ရပါသည်။ (၁၉၂၉-၁၉၆၈)ခုနှစ်လူမျိုးရေး အထိကရုန်း(၁၉၆၀)မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံကို ကာကွယ်ကယ်တင်ခဲ့သော ဒေါက်တာမာတင်လုသာကိန်းကို လေးစားကြည်ညို ကြရပါသည်။ (၁၉၁၁-၂၀၀၄)ခုနှစ်က သမ္မတရီကန်းအား၎င်း၊ ၁၉၂၅ ခုနှစ် မာကရက်သက်ချယ်နှင့် (၁၉၂၀-၂၀၀၅)ခုနှစ်က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ်(၂)တို့အား ကွန်မြူနစ်ရန်စွယ်မှ အနောက်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ လေးစားကြည်ညိုကြရပါသည်။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်အများတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ထဲက မဟုတ်ကြပေ။ သို့သော်လည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့က ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံကို ကာကွယ်ခဲ့ကြ ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မည်မျှပင် ကြီးမားပြီးဩဇာညောင်းပါစေ။ နောဧ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်သောအခါ အရာမရောက်လှပေ။ သင်သိသည့်အတိုင်းပင်၊ နောဧသည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘေးမှ လူမျိုးနွယ်စုကို ကယ်တင်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်ဍ
နောဧသည် ကလေးဥပုသ်စာဖြေများ ရေးဆွဲ၊ ဆေးခြယ်ကြသော ကာတွန်းရုပ်ပုံ မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၌ တားဆီးပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဆိုလျှင် ၎င်းကာတွန်းစာအုပ် ထုတ်ဝေခြင်းအား ပိတ်ပင်ပါမည်ဍ နောဧသည် တကယ်လူစွမ်းကောင်း တစ်ဦးပါ။ လူစွမ်း ကောင်းပါ။ ပျက်စီးစေခြင်းဘေးမှ လူမျိုးနွယ်စုအား ကယ်တင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတိုင်းက သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို လေးစားပြီး ကြည်ညိုကြ ရပါမည်။
နယူးယောက်မြို့၌ ဘီလီဂရေဟမ်၏ နောက်ဆုံ့းသောတရားဟောပွဲကြီး၌ မကြာသေးမှီက ဒေါက်တာကေကန်ဖတ်ကြားခဲ့သော ရှင်မဿဲ ၂၄း၃၆-၃၉ ထဲက နောဧ၏ အချိန်အခါအကြောင်းကို အထူးဟောကြားခဲ့ပါသည်။ နယူးယောက်မြို့ ကို ယိုနာဥယျာဉ်မြက်ခင်းပေါ် လူပေါင်း ၉၀၀၀၀ ကျော်ကို တရားဒေသနာ ဝေငှသောအခါ “ဝိညာဉ်စစ်ပွဲ”ဟူ၍ ဘီလီဂရေဟမ်အဆုံးသတ် ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဒေသနာတော်၌ မစ္စတာဂရေဟမ်က “နောဧအချိန်အခါ ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ ယနေ့ ဖြစ်ပျက်နေပြီဆိုလျှင် ယေရှုဘုရားတဖန်ကြွလာတော့မည်ကို သတိပြုကြစို့” ဟူ၍ ပြောကြားဝေငှခဲ့ပါသည်။ (Billy Graham, Living in God's Love, G.P. Putnam's Sons, 2005, p.110). ထိုဆရာကြီး တရားဟောစဉ်တုန်းက ကျွန်ုပ်အချို့သော အချက်အလက်များကို သဘောမတူခဲ့ချေ။ တကယ်တော့ ယနေ့နေ့ရက်ကာလ အဖြစ်အပျက်နှင့် နောဧခေတ်တုန်းက အခြေအနေ အတိအကျပင် တူနေပြီဖြစ်သည်။
သို့ပါသော်လည်း ယနေ့ညတွင် ကျွန်ုပ်သည် နောဧခေတ်အကြောင်းကို ဝေငှမည်မဟုတ်ပါ။ “နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်း” အကြောင်းကို အထူးဝေငှပါမည်။ ဒေါက်တာဒီဟန်း၏ The Days of Noah ဟူသော စာအုပ်၏ နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ထဲက အကြောင်းအရာကို အဓိကထားကောက်နုတ် ဝေငှပါမည်။ (Zondervan Publishing House, 1979 edition, pp. 178-184) ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၁၁း၇၌ မိန့်ဆိုထားသည်မှာ၊
“နောဧသည် မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကို ဘော်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ သင်္ဘောကိုတည်လေ၏။ ထိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကီ သားတို့ကို အပြစ်တင်၍ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်း အမွေခံရ၏။” (ဟေဗြဲ ၁၁း၇)
၎င်းကျမ်းစာတော်မြတ်၌ နောဧအကြောင်းကို ကျမ်းတစ်ပိုဒ်၌သာ ဖေါ်ပြထား ပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်၌ “ယုံကြည်ခြင်း”ဟူသော စာလုံးနှစ်ကြိမ်တွေ့ရပါသည်။ နောဧ၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်ခုနှစ်ခု ပိုင်းခြားနိုင် ပါသည်။
ကျမ်းစာတော်၌ လာသည်ကား “ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့ သော စိတ်ရှိ၍”ဟူသောနုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် အစပြုထားပါသည်။ ထာ၀ရ ဘုရားက ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟု နောဧအား သတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မဖြစ်စဖူးပါ။ ကမ္ဘာကြီးကို လွှမ်းမိုး လောက်အောင် ကြီးမားသောကပ်ဘေး ဆိုက်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မထင်ကြပေ။ နောဧသည် ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှသော နုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည် ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာဒီဟန်း ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်း ဟူသည် မည်သည့်သက်သေထောက်ထားမှုကို မတောင်းဆိုပေ။ မည်သည့် နမိလက္ခဏာနှင့် အသံတော်ကိုလည်း မတောင်းဆိုပေ။ အတိတ်နမိတ် အိမ်မက်၊ သိပ္ပဲအထောက်အထား မတောင်းဆိုပါ။ ရှေ့ဟောင်းတူးဖေါ်ရေးအထောက် အထား ပထဝီဆိုင်ရာ မည်သည့်အထောက်အထားကိုပင် မတောင်းဆိုပါ။ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ သမျှကို လက်ခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (ibid, p. 179) သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူ သည်ကား
“ယုံကြည်ခြင်းသည် မျှော်လင့်သောအရာတို့ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်း ဖြစ်၏။ မမြင်သေးသောအရာတို့ကို သိမှတ်စွဲလမ်းခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။” (ဟေဗြဲ ၁၁း၁)
မျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုလိုသည်မှာ ခိုင်မာသောယူဆချက် သိုမဟုတ် အနာဂါတ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လာမည်ဟု စိတ်ချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည် ခြင်းသည် “မမြင်သေးသောအရာတို့ကို သိမှတ်စွဲလမ်းခြင်းပင်”ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်နိုင်သောအရာ၌ မှီတည်ခြင်းမဟုတ်၊ “မမြင်နိုင်သောအရာ” တည်းဟူသော ဘုရားသခင်ပေးသနားသောအရာ၌ အမှီုခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဟူသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ “ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင် အထံတော်က ဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ဧဖက် ၂း၈ ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ရေလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်၍ ထိုမိန့်တော်မူ ထားသော နုတ်ကပတ်တော်ကို နောဧအားယုံကြည်ခိုင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် လက်တွေ့စမ်း သပ်မှုပေါ်၌ သာမူတည်ခြင်း မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
၂။	ဒုတိယ၊ နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်းသဘောသဘာ၀
ကျမ်းပိုဒ်တော်၌လာသည်ကား နောဧသည် “မမြင်သေးသော အမှုအရာ တို့ကို ဖော်ပြသော ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်”ဟူ၍ မိန့်ဆို၏။ “မမြင်သေးသောအရာ” သည် မကြာမှီရေကြီး၍ ကမ္ဘာမြေကြီးကို လွှမ်းမိုးမည့်အကြောင်းအရာကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထိုစဉ်တွင် ကောင်းကင်မှ မိုးလည်း ရွာသွန်းခြင်းမရှိသေးပင်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းဒုတိယအခန်းကြီး၌ မြေကြီးပေါ် မိုးမရွာမသွန်းသေးပါဟု မိန့်ဆိုထားပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နောဧခေတ်ရောက်လာသောအခါ မြေမျက်နှာပြင်ပေါ် ရေအခိုးအငွေ့များထွက် သဖြင့် မြေကြီးကို စိုစေခဲ့၏ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ဒုတိယ အခန်းကြီးကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသောအခါ၊
“ထာ၀ရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်း မြေပေါ်၌မိုးကို မရွာစေသေးသည် ဖြစ်၍ မြေမှအခိုးအငွေ့ထွက်သဖြင့် မြေတစ်ပြင်လုံးကို စိုစေလေ၏။” (ကမ္ဘာဦး ၂း၅-၆)။
မိုးသည် ကမ္ဘာမြေပေါ် မရွာသွန်းသေးချေ။ သို့သော် ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသော “မမြင်သေးသောအရာ”ကို နောဧယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်း ဆိုသည်ကား ကျွန်ုပ်တို့မရှင်းပြနိုင်သောအရာကို ယုံခြင်း၊ အကြောင်းမှာ ထိုအရာကို ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဟူသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားခြင်း၊ မှီတည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား “သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့် သင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်” (တမန်တော် ၁၆း၃၁)။ သို့သော် တစ်စုံတစ်ဦးက ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါဟု ပြောမည်၊ ယေရှုနှင့် မဆက်ဆံဖူးပါ။ အဘယ်သို့ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်နိုင်ပါမည်နည်း၊ ဟူ၍ ပြောနိုင်သည်။ ထိုအခါ သူသည် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကို လိုချင်၍ဖြစ်သည်။ သင်သည် ယေရှုကို မြင်တွေ့ချင်သည်။ ထိတွေ့ ချင်နေသည်။ သို့သော် ထိုလမ်းစဉ်ဖြင့် မည်သူမျှ ကယ်တင်ခြင်းမခံရကြ။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှု ကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ “မမြင်သေးသောအရာကို နောဧယုံကြည်သည်ပမာ၊ သင်မမြင်မတွေ့ခဲ့ဖူးသေးသော ယေရှုကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူ သည်ကား၊
“ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်။ အကြောင်း မူကား ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သောသူသည် ဘုရားသခင် ရှိတော်မူ သည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်ကိုရှာသောသူအား အကျိုးပေးတော်မူသည် ကို၎င်း၊ ယုံကြည်ရမည်” (ဟေဗြဲ ၁၁း၆)။
၃။	တတိယ၊ နောဧ၏ စိတ်နေစိတ်ထား
ကျမ်းစာတော်မြတ်၌လာသည်ကား “နောဧသည် မမြင်သေးသော အမှုအရာတို့ကို ဖေါ်ပြသော ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် “ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍” ဟုလာပါသည်။ နောဧသည် ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ ရေလွှမ်းမိုးမည်ဟု ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူသောအခါ၊ နောဧသည် ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါသည်။ “ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် အမိန့်တော်အတိုင်း လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။” ဒေါက်တာဒီဟန်း ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “လူသည် သေခြင်းကို လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ ကြောက်လန့်ကြပါသည်။ ထာ၀ရ ဘုရားသခင်နှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းကို မလိုလားကြ။ ကျိန်ဆဲကြ၏။ ပြောင်လှောင် ခဲ့ကြ၏။ ဝှမ်းနှင့်ကရိန်းကဲ့သို့ တမန်လွန်ဘ၀ရောက်သောအခါ ခွေးပေါက်စ ကလေးများ ဝိုင်းကိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ဖူးပါသည်။ စိတ်နှလုံးသား မှန်ကန်သောသူတို့သည် ကျရောက်လာမည့်ထာ၀ရဘုရား၏ အမျက်ဒေါသကို ကြိုတင်ကြောက်ရွံ့ခြင်း ရှိရပါမည်။ ဟုတ်ပါပေ၏။ နောဧသည် ထာ၀ရဘုရား၏ အမျက်ဒေါသမှာ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရှာဖွေခဲ့သည်” (ibid., p. 180).
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ အပြစ်သားတို့အဖို့ ငရဲရှိကြောင်း မိန့်တော်မူ ထားပြီးဖြစ်သည်။ နုတ်ကပတ်တော်၌ လာသည်ကား
“လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍၊ ထိုနောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရမည်” (ဟေဗြဲ ၉း၂၇)
ထာ၀ရဘုရား၏ အမျက်ဒေါသနေ့ကို ကြောက်လန့်ပြီး ယေရှုသခင်ထံ ချဉ်းကပ်လျှက် ကယ်တင်ခြင်းရယူလိုက်ပါ။ ဒေါက်တာဒီဟန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲလျှက် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီဟုဆိုလျှင် မေးစရာမေးခွန်း ရှိလိမ့်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ (ibid.).
၄။	စတုတ္ထ၊ နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်
ကျမ်းစာတော်မြတ်၌လာသည်ကား “နောဧသည် မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကို ဖေါ်ပြသော ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ သင်္ဘောကိုတည်လေ၏ နောဧ၏ ယုံကြည်ခြင်း၌ လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ သတိပေးခြင်းအား အတွင်းနှလုံးသားထဲ၌ ယုံကြည်နေရုံဖြင့်မပြီးပါ။ ထိုသတိပေးမှုအပေါ် လက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုရှိနေရမည်။ သင်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ပါသလား၊ ယေရှုဘုရားကို ယုံကြည် ကိုးစားခြင်းမရှိသော အပြစ်သားများကို ဘုရားသခင်အပြစ်ပေးမည်ကို သင်ယုံကြည်ပါ သလား၊ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ယေရှုကို သာမန်ယုံကြည်နေခြင်းဖြင့်လည်း သင်သည် ဝိညာဉ်ပျောက်နေဆဲဖြစ်နိုင်၏။ အချို့လူတို့က “ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ သင်ဘာမှ လုပ်ဆောင်စရာမလိုပါ”ဟူ၍ မကြာခဏပြောလေ့ ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ဆန့်ကျင်ဘက် အမှန်တရားဖြစ်၏။ “ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံး သူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ သင်ဘာမှ လုပ်ဆောင်စရာမလိုပါ”၊ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား မယုံကြည်သောသူမူကား ဘုရားသခင်၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို မယုံကြည်သောကြောင့် ယခုပင် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရ၏။” (ယောဟန် ၃း၁၈)။ သင်သည် မယုံကြည်သောသူဖြစ်လျှင် ယခုပင် အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရမည်။ ထောင်မှူးက ရှင်ပေါလုအား မေးသည်မှာ “အကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငှါ အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း၊ ဟူ၍ မေးသော် “မည်သည့်အရာတစ်ခုခုကို သင်မလုပ်ဆောင်ဘူးလား”ဟု ရှင်ပေါလု မပြောခဲ့ပါ။ ထိုသို့မပြောပါဍ တမန်တော်က ထိုသူအား “သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့”ဟူ၍ ပြောခဲ့ပါသည်။ (တမန်တော် ၁၆း၃၁)။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်ကို သင်ယုံကြည်ပါသလား၊ ထာ၀ရအသက်ရလိုသောငှါ ကယ်တင်ရှင်ထံသို့ သင်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်နေပါသလား ၊
၅။	ပဥ္စမ နောဧ၏ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်း
ကျမ်းစာတော်မြတ်၌လာသည်ကား “နောဧသည် မမြင်သေးသောအမှုအရာ တို့ကိုဖေါ်ပြသော ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သော စိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သား တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှါ သင်္ဘောကိုတည်လေ၏။ နောဧသည် မိမိတစ်ဦးတည်းကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှါ မလိုလားခဲ့ချေ။ မိမိမိသားစုကို စာနာထောက် ထားခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မိမိအိမ်သူအိမ်သားများကိုကယ်တင်ဖို့ သင်္ဘောကိုတည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ သင်္ဘောကိုတည်လေ၏” ဟူ၍ကျမ်းစာ၌လာပါသည်။ ဒေါက်တာဒီဟန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ထိုသို့သောစိတ်သ ဘောသည် စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတစ်ဦး၏သက်သေ” ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ လူတစ်ဦး သည် စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲလာသောအခါ တစ်ပါးသောသူတို့ကို ကိုယ်ချင်းစာထောက်ရှုလျှက်၊ မိဘနေရာ၌သော်၎င်း၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မရင်းချာကဲ့သို့ တစ်ပါးသောသူတို့ကို ကိုယ်ချင်းစာ စာနာတတ်သည်ကို ကျွန်ုပ်မကြာခဏ တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးပါသည်။ “မိမိတို့၏ မိဘတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရုံနှင့်မပြီး၊ အခြားသော သူတို့ကိုလည်း ခရစ်တော်ဘုရားကို လက်ခံယုံကြည်ပြီး တပါးသောသူတို့အား ခရစ်တော်ထံ လူသစ်တို့ကို ခေါ်ဆောင်ပေးဖို့ ဆော်ဩပေးပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းအတိုင်း သင်ကျင့်ကြည့်ပါလျှင် သင်သည်ဝိညာဉ်သေဆုံးသူလား၊ ထာ၀ရအသက်ရှင်သူလား ဆိုသည်ကို ခွဲခြားသိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ နောဧသည် “မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှါ သင်္ဘောကိုတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။” (ibid., pp. 181, 183).
၆။	ဆဌမ၊ နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်းအထောက်အထား
ကျမ်းစာတော်မြတ်၌လာသည်ကား နောဧသည် မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကို ဖေါ်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီး မှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ သင်္ဘောကိုတည်လေ၏” သင်္ဘောကြီး တည်ရခြင်း၏အကြောင်းကား နောဧမိသားစုကို ကယ်တင်ဖို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် သတိပေးသံသည်ကား မယုံကြည်သောသူတို့အားလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်း၌ မိန့်တော်မူသည်ကား “ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ဟောသော နောဧနှင့် လူခုနှစ်ယောက်ကို စောင့်မတော်မူ၍” (၂ပေ၂း၅)လာပါသည်။ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ နောဧသည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ဘေးဒါဏ်မှ လွတ်မြောက်ဖို့ တရားတော်ကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ တစ်နေ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ လူများနောင်တရလျှက် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ နောဧတောင်းပန် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ နောဧ၏တရားဒေသနာနှင့်သင်္ဘောကြီးသည် ဤလောကလူသားအား သက်သေခံ ဟောကြားနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် နောဧ၏အိမ်သူအိမ်သားကလွဲ၍ မည်သူကမှ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သက်သေခံဝေငှခြင်းဖြင့် သင့်အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်းထက် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သစ္စာရှင်မင်းအဖြစ် ဆက်လက်၍ တည်ရှိနေပါသည်။ ကောလိပ်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်များ တဖန်ဖွင့်လှစ်ပါ တော့မည်။ သင်တို့လည်း မိမိတို့နည်းဟန်ဖြင့် အနည်းအနည်းအဖုံဖုံ ဝိညာဉ်ဖမ်းဆီး နိုင်ကြမည်ဟုထင်ပါသည်။ ထိုသူတို့၏နာမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အသင်းတော်သို့ ယူဆောင်လာကြပါ။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း နားထောင်စေဖို့ သင်၏မိသားစု အပေါင်းအသင်းများအားလုံး ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ဖို့ ဆက်လက်တိုး၍ ကြိုးစားလုပ်ဆောင် ကြပါစို့။
၇။	နောဧယုံကြည်ခြင်း၏ ဆုလဒ်သရဖူ
နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ နောက်ထပ်ဟောပြောစရာ ရှိပါသေးသည်။ နောဧ၌ ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံ၊ ယုံကြည်ခြင်း၏သဘောသဘာ၀၊ ယုံကြည်ခြင်း၏ စိတ်နေစိတ်ထား၊ ယုံကြည်ခြင်း၏အလေ့အကျင့်၊ယုံကြည်ခြင်း၏ ပမာဏနှင့် ယုံကြည် ခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမြင်ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင် နောက်ဆုံးသော “ယုံကြည်ခြင်း၏သရဖူ” အကြောင်း ဝေငှမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်ကား
“နောဧသည် မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကို ဖေါ်ပြသော ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သား တို့ကို ကယ်တင်ခြင်း ငှါသင်္ဘေကိုတည်လေ၏။ ထိုသို့ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကီသားတို့ကို အပြစ်တင်၍ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သောကြောင့် ဖြောင့် မတ်ခြင်းကိုလည်း အမွေခံရ၏” (ဟေဗြဲ ၁၁း၇)။
နောဧသည်လည်း အပြစ်ကင်းသောသူတစ်ဦးမဟုတ်ပါ။ သူလည်း မိတ်ဆွေတို့လို အပြစ်သားတစ်ဦးသာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍ သင်္ဘောကိုတည်ဆောက် သောကြောင့် ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ထိုသူအထဲသို့ အစားဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောသည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကို သတိရစေလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အကြောင်းဟောပြောနေသည်ဟု နောဧယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ သင်သည် ခရစ်တော်အထဲသို့ ဝင်ရောက်သကဲ့သို့ နောဧသည်လည်း သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ နောဧသည်လည်း သူ၏ဝိညာဉ်နှင့်အသက်တာကို သင်္ဘောထဲသို့ ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းရယူခဲ့ပါသည်။ သင်လည်း သင့်အသက်တာဘ၀တစ်ခုလုံး ခရစ်တော်၌ ယုံယုံကြည်ကြည်ဆက်ကပ်အပ်နှံပြီး ကယ်တင်ခြင်းရယူလိုက်ပါ။ နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်ရောက်တော်မူခဲ့သည့်နည်းတူ သင်သည်လည်း ခရစ်တော်၏အထဲသို့ ခိုဝင်လိုက်ပါ။ နောဧသည် သင်္ဘောကြီးကို ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် အထဲသို့ဝင်တော်မူသကဲ့သို့ သင်သည်လည်းယုံယုံ ကြည်ကြည်နှင့် ခရစ်တော်ကို ကိုးစားပြီး အသက်တာကို အပ်နှံလိုက်ပါ။
တံခါးသည်ဖွင့်လှစ်နေစဉ်၊ သင်သည်ခရစ်တော်ထံသို့ သွားရောက်ချဉ်းကပ် တိုးဝင်လိုက်ပါ။ သင်္ဘောဝင်ပေါက်တံခါးသည် တစ်ပေါက်တည်းသာရှိသည်။ တံခါး ပေါက် ပိတ်လိုက်မည်ဆိုလျှင် အားလုံးမျှော်လင့်ရာမဲ့ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ဍ အခြား တစ်ပါးသော သင်္ဘောမရှိတော့သောကြောင့်၊ အခြားသောသင်္ဘောကြီးဖြင့် ကယ်တင် ရယူ၍ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဍ ဒေါက်တာဒီဟန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကျွန်ုပ်သေသေ ချာချာပြောနိုင်သည်မှာ မိုးစတင်ရွာသောအခါ လျှပ်ပျက်လာတော့မည်။ မိုးချိန်းလာမည်။ ထိုအခါရေလည်းတက်လာမည်။ လူဟအများ]တို့သည် (အခြားသော)သင်္ဘောကိုစီး၍ အသက်ကိုကယ်တင်ယူလိုကြပေမည်။ သို့သော်လည်း အခြားသောသင်္ဘောကြီးဟူ၍ မရှိတော့ပါ။ သင်္ဘောသည် တစ်စီးတည်းသာရှိပါသည်။ ထိုလူတို့သည် သင်္ဘောနှင့် လွဲချော်ခဲ့ကြရသည်။ ထိုလူတို့သည် သင်္ဘောကို မျှော်လင့်တကြီး စောင့်မျှော်နေ ခဲ့ကြသည်။ ဟရေသည် တဟုန်တိုးတက်လာသည့်အခါတွင်] အလွန်ကြောက်လန့်ဖွယ် လူသားတို့အား လွှမ်းမိုးတော့လေ၏ဍ ဝမ်းနည်းကြေကွဲငိုယိုလျှက် သင်္ဘောတံခါးကို ခေါက်ခဲ့ကြ၏ဍ တိရိစ္ဆာန်အော်ဟစ်သံတညည်းညည်းနှင့် လူတို့သည် မိမိအထင်သေး အမြင်သေးခဲ့သော သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်လိုကြသည်ဍ (သို့သော် တုန့်ပြန်သံမကြား ရတော့ပေ။) တံခါးသည် ပိတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ “ထိုသူတို့သည် သင်္ဘောကြီးနှင့် လွဲချော် ခဲ့ကြရပြီဖြစ်၏ (ibid., pp. 183, 184) အလွန်ပင်အချိန်နှောင်းခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဍ
ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား ]]လူသားသည် ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း မဖြစ်မှီကာလ၌ နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်သောနေ့တိုင်အောင် လူတို့သည် စားသောက်လျှက်၊ ထိမ်းမြားစုံဖက်လျှက်နေ၍၊ ရေလွမ်းမိုးခြင်းရောက်သဖြင့် လူခပ်သိမ်းတို့ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်တိုင်အောင် သတိမဲ့နေ ကြသည့်နည်းတူး လူသားကြွလာသောအခါ၌ ဖြစ်လာမည်။(မဿဲ ၂၄း၁၇-၃၉) နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုစီသည် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ကျွန်ုတို့ အသက်ရှင်ကြရ သည်ကို သတိပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ]]နောဧ၏ နေ့ရက်ကာလပမာဖြစ်သည်။ အခြားသော သူတို့သည် လောကအရာများကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်၊ ထာ၀ရကယ်တင်ခြင်း အချိန်မနှောင်းခင် သင်နောင်တရလျှက် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိစေလိုပါသည်ဍ မစ္စလစ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်းပေးပါ။
-	တရားဒေသနာမတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာဂရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မဿဲ ၂၄း၃၇-၄၂ ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
- တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဖ်မှ (၁၈၃၆- ၁၉၀၀ ခုနှစ်၊ ဂျွန်အိပ်ခ်ျရိစ်ရေးသားသီကုံးရေးသားသော “ယုံကြည်ခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်း” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
“နောဧသည် မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကို ဖေါ်ပြသော ဗျာဒိတ် တော်ကို ခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါသင်္ဘေကိုတည်လေ၏။ ထိုသို့ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကီသားတို့ကို အပြစ်တင်၍ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်း အမွေခံရ၏” (ဟေဗြဲ ၁၁း၇)။
၁။	နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံ ဟေဗြဲ ၁၁း၇၊ ဧဖက် ၂း၈၊
ဟေဗြဲ ၁၁း၇၊ ကမ္ဘာဦး ၂း၅-၆၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၆း၃၁၊ ဟေဗြဲ ၁၁း၆
၃။	တတိယ၊ နောဧ၏ စိတ်နေစိတ်ထား ဟေဗြဲ ၁၁း၇ç ၉း၂၇
ဟေဗြဲ	၁၁း၇ç ယောဟန် ၃း၁၈ç တမန်တော် ၁၆း၃၁၊
၅။	ပဥ္စမ နောဧ၏ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်း ဟေဗြဲ ၁၁း၇
၆။	ဆဌမ၊ နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်းအထောက်အထား ဟေဗြဲ ၁၁း၇၊ ၂ပေ ၂း၅
၇။	နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်း၏ ဆုလဒ်သရဖူ ဟေဗြဲ ၁၁း၇၊ မဿဲ ၂၄း၃၇-၃၉၊